ALT / AST / T-Bil / ALB - Chiropa ChinoshandaⅠ Inokurumidza Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
ALT / AST / T-Bil / ALB - Ropa RinoshandaⅠ Rapid Reagent Kit
[email inodzivirirwa] Iyo Alanine Aminotransferase / Aspartate Aminotransferase / Yese Bilirubin / Albumin Reagent Kit inoitirwa kuyera huwandu hwezviitwa zvealanine aminotransferase (ALT) uye aspartate aminotransferase (AST) uye kusangana kwezvese bilirubin (TB) uye albumin (ALB) kusangana kwevanhu serum. Kiriniki, inowanzo shandiswa pakubatsira kuongororwa kwechirwere chechiropa.
ALT neASST zviratidzo zvinonzwisisika zvechiropa maseru ekukuvara uye degree rekukuvara kwechiropa. Iko kusungirirwa kweASS kunokwidziridzwa zvichiramba uye kunoenda kupfuura ALT kusungwa kunowanzo kuratidza kukuvara kwakakomba kwechiropa uye chiratidzo chekuwedzera kwechirwere chisingaperi.
TB ndiyo huwandu hwakazara hweiyo yakananga bilirubin uye isina kunangana bilirubin. Kiriniki, inonyanya kushandiswa kuongorora kuti chirwere chechiropa kana biliary turakiti iri munzvimbo isina kujairika.
ALB inogadzirwa nechiropa. Kana paine zvakanyanya hepatosis (senge chiropa cirrhosis), kugona kwechiropa kuburitsa albumin kwakadzikira zvakanyanya, zvichikonzera kuderera kweserum albumin yevasungwa.
Liquid phase reaction system, uchishandisa rate nzira & yekupedzisira-poindi nzira nzira nzira inotungamira kune chaicho mhedzisiro